लगानी सम्मेल : विपक्षीलाइ पत्तै छैन,विप्वलवलाइ बन्दुक ! – www.agnijwala.com
लगानी सम्मेल : विपक्षीलाइ पत्तै छैन,विप्वलवलाइ बन्दुक !
काठमाण्डाैं,चैेत । चैत १५ र १६ गते सरकारले नेपालमा लगाानी सम्मेलन गर्ने तिव्र तयारी गरेको छ । सम्मेलनको लागि सवै खालका तयारी पुरा भइसकेको सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न ४० मुलुकका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६ सय भन्दा बढि विदेशी लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति रहने सरकारको भनाइ छ । त्यसैगरि सम्मेलनमा करिब १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने तयारी भइरहेको छ । दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवम् शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपालको उत्तर तर्फ रहेको चीन र दक्षिण तर्फ रहेको भारत अहिले आर्थिक समृद्धिको उच्चतम विन्दुमा पुग्न लागेका छन । यस्तो बेलामा नेपाल विचमा बसेर कमजोर वा अरुको भर पर्ने खालका भएर बस्न सक्दैन । यसको लागि नेपाल समृद्ध हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा अब समृद्धिको लागि स्वदेशी पुजिपतिले जे जति गर्न सक्छन त्यसलाइ पुजिकृत गरेर ठुला विदेशी लगानीकर्ता भित्रयाउनुपर्छ ।
तर,नेपालमा यसरी ठुला लगानीकर्ता भित्रयाउनको लागि सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । सरकारले सवैभन्दा पहिला नेपालमा विदेशी लगानीको लागि नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण छ भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ । र,यसको लागि वोलेर होइन,ब्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । सहमतिको वातावरण छ भनेर देखाउनको लागि सरकारले सवैभन्दा पहिला संसदमा रहेका राजनीतिक दलको विचमा संवाद गरि सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ भने यसको लागि विपक्षी दलको नेताको लागि विश्वासमा लिनुपर्छ । तर,यति ठुलो लगानी सम्मेलन हुदा सरकारले न संसदमा बहश गरेको छ न अन्य राजनीतिक दललाइ विश्वासमा लिएको छ । किन प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेतालाइ लिएर चीन र भारतमा जान सकेनन ? किन नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर एउटै मञ्चबाट दुवै नेताले वोल्न सकेनन ?
यसकोे अतिरिक्त सरकारले सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ । तर,कस्तो संयोग परेको छ भने नेपालमा लगानी सम्मेलन भइरहदा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाइ प्रतिवन्ध लगाएर उनका कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ परिरहेका छन । के यसले लगानीको वातावरण बनाउछ ?
सरकारले लगानीको लागि वातावरण छ भनेर भनिरहने तर यसको लागि कानुनी झञ्झट,प्रक्रियागत झञ्झट नहटाउने र सहमतिको वातावरण पनि नवनाउने अवस्थाले कस्तो खालको लगानीको वातावरण वनाउला ?
आईपीएल क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादले राजस्थान रोयल्सलाई हरायो
ईपीएल क्रिकेटमा काठमाण्डौ किङ्ग्स इलाभेन र पोखरा राइनोज खेल्दै
आज विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस ः
अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५० लाख धरौटी
विकास ओसार्दै कर्णाली सडक
अझै खुलेनन् नाकाः पैदल यात्रीलाई खुकुलो, सवारी आवागमन बन्द
जड्याहा स्मार्ट फोनबाटै थाहा पाउन सकिने अब जड्याहालाई बिहे गर्न मुस्किल
तपाईंको आजको भाग्यबारे थाहा पाउन हेर्नुस् राशिफल
‘बा, हाम्रो घरको धारामा किन पानी नआएको ?’
अध्यादेश खारेज, सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा सहमति
राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्क अगाडि सयौं महिलाहरूले गरे प्रदर्शन